ကျွန်ုပ်၏ထိတ်လန့်စရာဇာတ်လမ်း - နှစ်အနည်းငယ်ကြိုးစားနေစဉ်သင်၏ ဦး နှောက် On Porn သည်စဉ်းစားစရာအချက်များဖြစ်သည်
အကြှနျုပျ၏ထိတ်လန့်ပုံပြင်: နှစ်အနည်းငယ်ဘို့ကြိုးစားနေခဲ့, ဒီမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရာဖြစ်ကြ၏
ငါသည်သင်တို့အဘို့ကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်နိုင်သောလမ်းကြောင်း၏သင်္ကေတဖြစ်၏။ ငါသည်သင်တို့ကို porn မှ fapping အဓိကပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိဖြစ်သင့်ဘာဖြစ်လို့၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်၏။ ကိုယ့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကဲ့သို့မိမိကိုမိမိစိန်ခေါ်ရန်ကြိုးစားသူတစ်ဦးနှစ်တစ်ထောင်မပေးဖြစ်၏။ နညျးလမျးမြားစှာတှငျဤဘဝ-ခရီးရှည်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ့အဘို့အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, နောက်ဆုံးမှာ bestiality နှင့် Craigslist နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်ရုံနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုပြည့်တန်ဆာအနေဖြင့်ယောက်ျားတွေနှင့်အတူပြီးတော့မြင့်မားတဲ့စွန့်စားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုကျပစျမှဦးဆောင်ရသောမိန်းကလေးများနှင့်အတူညျ့စုံပေါ့ပေါ့စိတ်ခံစားမှု / ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနှင့်အတူထွက်သရုပ်ဆောင်ဖို့ဦးဆောင်သည့်ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ် porn စွဲမှဦးဆောင် ငါတောင်မှ cruised ့လမ်းလျှောက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာစောင့်ဆိုင်းသာမန်အမျိုးသမီးအရပ်သားများတက်ကောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြအခါသမယ၏စုံတွဲတစ်တွဲတွင်စသည်တို့ကို Stripper, masseuses ။ နှစ်ပေါင်းများစွာအကြှနျုပျ၏တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအစည်းအဝေးများ fantasies- ကျွန်မရဲ့ကောင်းစွာ, သင်စိတ်ကူးနိုင်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဆီးနှင့်သုတ်ရည်စားသုံးအိမ်ထောင်စုပစ္စည်းများ, အမျိုးသမီးမိသားစုဝင်များထံမှအစားအစာ, အဝတျအစား / ဖိနပ်, စသည်တို့ကိုထည့်သွင်းပါပွီ။ သတင်းစာဆောင်းပါးတွေဖတ်ခြင်းနှင့် sicker ယောက်ျား၏နစ်နာမှုဗီဒီယိုများကြည့်ရှုအဲဒီမှာတစ်ပိုဆိုးအဆင့်သောနောက်ပင်ဖြစ်ပြီး, ကျေးဇူးတင်စရာငါပြုသောအမှုဖူးဘူးငါသိ၏။
ငါရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့လေပိုဆိုးလေပဲ။ အနာဖေးမှာကောက်တာနဲ့တူတယ်။ ငါလပေါင်းများစွာနှင့်နေ့စဉ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအခါအခြားအချိန်များတွင်စင်ကြယ်သောအချိန်များတွင်ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ဒီမှာငါ့အကြံပြုချက်များမှာ:
1) အတှငျး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်ကိုသုံးပြီးပြဿနာများ၏အမြစ်ကိုရယူပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်လူနှင့်အတူရိုးသားပါ။ သင့်ကိုယ်သင်ဝန်ခံပြီးခွင့်လွှတ်ပါ အကျင့်ဆိုးအများစုသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များ၊ သင်မည်သူ့ကိုမျှမပြောနိုင်၊ မိဘများ၊ မိသားစု၊ ဆရာများ၊ အတန်းဖော်များနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအဓိကထားသည်။ သင်ဟာချို့ယွင်းချက်ရှိသည်ဟုခံစားရပြီးသင်၏စိတ်တွင်းရှိအပေါက်ကိုဖြည့်ရန် fapping / porn ကိုသုံးပါ။ သငျသညျအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုမရနိုင်လျှင်, သင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်သင့်အားလမ်းပြရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီရရန်လိုအပ်သည်။ အမှန်တရားကတော့သင့်ရဲ့ဆားကိုတန်ဖိုးရှိရှိမည်သည့်စိတ်ပညာရှင်မဆိုသင်ကအလွန်အကျွံအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကိုစွဲလမ်းနေတယ်ဆိုရင်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပြီးသင့်ရဲ့ပျက်စီးမှုကိုကန့်သတ်ရန်ကူညီလိမ့်မယ်။ ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကြိုးဖြစ်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုကိုတုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့်နောက်အဆင့်သို့ဆက်လက်ထားရန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်မှုပြန်ရနိုင်သည်။
၂။ သင်၏ပုံစံနှင့်အလေ့အကျင့်ကိုဖော်ထုတ်ပါ။ သင်လှည့်စားရုံမျှသာဖြစ်သည့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သဘောတူညီမှုဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်လုပ်နေသည့်အခါသိပါ။ သင်ခဏတာသန့်ရှင်းနိုင်လျှင်၎င်းတိုက်တွန်းမှုသည်နိမ့်သွားလိမ့်မည်၊ တိုက်တွန်းမှုများမှာပုံမှန်ဖြစ်သည်၊ သင့် ဦး နှောက်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအနာပျောက်စေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါ၊ ယုံကြည်ပါ။ ပညတ်တော်တို့ကိုအစု။ horny ခံစားမှုဟာ "တရားမျှတမှု" ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ထားပါ။ အခြားခံစားချက်အားလုံးအပေါ်သင်မပြုမူသကဲ့သို့သင်ကထိုအရာကိုမဖြစ်မနေလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အခြားအရာတစ်ခုခုလုပ်ပါ
3) အတိတ်အမှားတွေ, ဒုစရိုက်တို့ကိုခရီးဆောင်အိတ်များကိုသင်ချကိုင်မခံပါနဲ့။ လူသားတွေဟာအတိတ်ကိုရင်းစိတ်မကောင်းခြင်းနှင့်အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာ / ကိုကျိန်ဆဲနေကြသည်။ ယခုကြှနျုပျတို့ထာဝရအကြောင်းကိုမေ့လျော့။ ကျနော်တို့ပစ္စုပ္ပန်အတွက်အသက်ရှင်ရန်ပါဝါရှိသည်နှင့်ဖြစ်ကောင်းအနာဂတ်မှာ၏မိုဃ်းတိမ်သည်တစ်ဦးကောင်းရှိသည်။ ငါသည်ဤ post ကိုရဲ့အစမှာငါ့အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူသောအမှုရှိသမျှတို့ကိုဝန်ခံအခါ, သငျသညျငါထ fucked ငါနှင့်ငါ့ဘဝ၏ကျော်သည်ဟုမထင်စေနိုင်သည်။ တကယ်တော့ငါရှေ့ဆက်နိုင်ပါ။ သင့်ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ငါ့အသက်ကိုမှအနတ္တဖြစ်ကြ၏။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏ဖိနပ်၌နေကြသည်မဟုတ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျနော်တို့၏ရှက်ကြောက်သောအရာတို့ကိုပြုကြပြီ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတစ်လူနေမှုငရဲအောင်မရှိကြပါဘူး။ ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်အပြစ်ပေးရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့တိုင်းမိနစ်ကျော် start ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရုံတိပ်ပြန်ရစ်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်အနေဖြင့်သင်ယူကြသည်။ သငျသညျကျောတောင်တော်၏အောက်ဆုံးမှမကျကြဘူး။ တကယ်တော့မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမတောင်တော်သို့လည်းမရှိ။
4) ထိန်းချုပ်မှုကိုပြန်ယူပါ။ ချိုသာသောတိုက်တွန်းမှုရောက်လာသောအခါသင်တစ် ဦး တည်း နေ၍ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ဘယ်သူမှသင့်ကို porn ကြည့်ဖို့အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးတာမျိုး၊ ဒါတွေဟာသင်လေ့လာခဲ့တဲ့အကျင့်ဆိုးတွေပါ၊ အတွေးများနှင့်ခံစားချက်များကိုသတိပြုပါ၊ သို့သော်မနာခံပါနှင့်။ သင်၏အတွေးများကမင်းကိုအော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်ထိုက်တန်ကြောင်း၊ သင်၏အခွင့်အရေးကိုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမှဂရုမစိုက်ခြင်း၊ ကြီးမားသောကိစ္စမဟုတ်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မည်၊ ဒါဟာပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်, သမျှညှိနှိုင်းသို့မဟုတ်ဆင်ခြင်တုံတရား။ သင်သည်သင်၏ script ကိုပြန်လည်ရေးသောအခါ, သင်အမှန်တကယ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားတည်ဆောက်ပါလိမ့်မယ်။
5) ကိုလက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသငျသညျဖျက်ရန် ထင် သင်ဒီမှာနှင့်တခြားနေရာရရှိပါသည်။ ပုံကြီးကိုမကြည့်ဘဲရေတွက်။ ရက်နှင့်ရေတွက်လျှင်သင်စွဲနေမည်ဆိုလျှင်ထိုအကျင့်ကိုသင်ကန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်ဟာအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရပြီးသံသရာကိုပြန်လုပ်ပြီးစိတ်ပျက်ရလိမ့်မယ်။ သင့်ကိုယ်သင်ခွင့်လွှတ်ရန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုရှိသည့်စိတ်ဓာတ်ရှိပါက fap သို့အခမဲ့သွားနိုင်သည် (ကက်သလစ်တစ် ဦး ကယဇ်ပုရောဟိတ်ကိုဝန်ခံသည်နှင့်ထပ်တူအပြစ်ကိုကျူးလွန်သည်နှင့်တူသည်) ဆိုလျှင်သင်မှားယွင်းသောလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ “ ချော်” ကိုအာရုံမစိုက်ပါနှင့်။ တစ်နေ့တွင်သင်သည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၊ သင်သည်လွတ်မြောက်လိမ့်မည်။ သငျသညျအသကျရှငျအသက်တာနှင့်ဤအတွေးပုံစံများထက်ကျော်လွန်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ကြောင်းသိထားပါ။ နိယာမများကိုကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်သင်အပြည့်အဝပြန်လည်ကျန်းမာလာနိုင်သည်။
6) အသက်တာ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုကဘာလဲ? ကောင်းသောအလေ့အထများဖန်တီးမှုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရေးသားခြင်းခံရဖြစ်စေ, programming, drawing, modding, သီချင်းဆိုခြင်း, ကခုန်, တစ်ခုခု-ဘာမှလုပ်ပါဝင်သည်။ ကောင်းသောအလေ့အထ, အခြားသူများကူညီပေးနေအခြားသူများကိုဆုံးမဩဝါဒ ပေး. , နှင့်အကောင်းတစ်ဦးစံပြဖြစ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အမှန်တကယ်ဝါသနာကိုရယူပါ။ ကျန်းမာလေထုကိုဖန်တီးပါ။ အချို့သောတန်ဖိုးရှိရှိနေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုရယူပါ။ လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်လေ့လာပါ။ သင်တို့တွင်အချို့သောသင်သိ-It-alls များမှာထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ကျနော်တို့အားလုံးအသိပညာ၏ 1% ကိုသိရန်ကံကောင်းဖြစ်ကြသည်။ အဆက်မပြတ်အသစ်သောအရာတို့ကိုသင်ယူသင်၌စိတ်ဝင်စားကြသည့်အကြောင်းအရာများကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့်လူသစ်တွေလေ့လာပါ။ ရေမှိုတထွေးကဲ့သို့ပွင့်လင်းစိတ်ကိုထားပါ။ သင့်ရဲ့အထူးစိတ်အားထက်သန်မှုကအောက်ပါ။ အခုသင်ကပေါ်သုံးဖြုန်းအချိန်ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးလျက်, PMO သင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏အဆင့်အထိကျဆင်းသွားလျှင်, လိင် monger ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအခြားအရာတစ်ခုခုထွက်ရှိလည်းမရှိကိုသိ! ပြောင်းလဲချိန်!
7) ဝိညာဉ်ရေးရာကိုရယူပါ။ သင်ဖြစ်နိုင်ပြီးသားအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြ၏။ သငျသညျဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းဆန့်ကျင်ဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ပင်သိပ္ပံအသက်, စကွဝဠာနှင့်ဝိညာဏ်စိတ်ကျေနပ်စရာ၏အစနှင့် ပတ်သက်. ကြီးတွေမေးခွန်းများကိုမဖြေနိုင်။ သင်ကိုယ်တိုင်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောသူရှိ၏ဟုခံစားရနိုင်အောင်တည်ထောင်စွပ်စွဲ debunked သည့်အကြောင်းအရာများထဲကခွဲထွက်။ လူသားမြားသညျယုံရပ်တန့်အစားအစာကွင်းဆက်၏ထိပ်ဆုံးအပေါ်ဖြစ်ကြပြီးအရာအားလုံးငါသိ၏။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် Self-သနားစေပါတယ်။ ဒါဟာ nihilism စေပါတယ်, သင်မပါကိုယ်ကျင့်တရားများတစ်ချိန်ကသင်တက် fucked shit အများကြီးလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ လူသားတစ်ဦး, မနိမ့်ဆုံးအခြေခံ Self-ဆန္ဒပြည့်အဖြစ်သင့်အပြည့်အဝအလားအလာရန်သင့်အားပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်စေသောအဓိကယုံကြည်ချက် system ကိုဖန်တီးပါ။ အနိမ့်မြင့်မားမဟုတ်ရည်ရွယ်ပါသည်။
LINK - အကြှနျုပျ၏ထိတ်လန့်ပုံပြင်: နှစ်အနည်းငယ်ဘို့ကြိုးစားနေခဲ့, ဒီမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရာဖြစ်ကြ၏